Al-Shabaab oo la ogaaday in dhalinyaro u dagaalama ay ka qorteen gudaha Kenya | Salaan Media
Al-Shabaab oo la ogaaday in dhalinyaro u dagaalama ay ka qorteen gudaha Kenya
Tan iyo markii Xarakada Al-Shabaab ay qaaday weerarkii Rugta Ganacsiga ee Westgate 21-kii bishan ayaaa waxaa isa soo tarayay walaaca laga qabo in mar kale weeraro ay ka geysato gudaha dalkaas.
Weerarkii Westgate oo qaatay muddo afar maalmood ayaa la ogaaday inuu hogaaminayay weerarkaas nin Kenyan oo horay uga mid ahaa ciidamada gaarka ah ee Kenya, kaasoo ku biiray Xarakada Al-Shabaab, markii uu Muslimay.
Hey’adda Xasarada Aduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICG ayaa warbixin ay soo sartay ku sheegtay in Al-Shabaab ay bilowday inay dhalinyaro u dagaalama ka qorato gudaha dalka Kenya.
Madaxa ICG qeybta Afrika Mr Hogendoom ayaa sheegay in sare u sii kaceen tirada Al-Shabaab ka qoratay gudaha Kenya, kuwaasoo tababaro ku qaata gudaha Soomaaliya, kadibna ay si dhuumaaleysi u galaan dalkaas si ay weeraro uga fuliyaan.
“Waxaa jira tiro dhallinyaro ah oo Al-shabaab ay ka qoratay Kenya, iyagoo kuwood ugu badan ka qoratay gobolka Waqooyi-bari ee Kenya oo ku dhow soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya”ayuu yiri Hogendoom.
Qaar ka mid ah Muslimiinta Kenya ayaa sheegay in dhalinayarada badankood ay yihiin kuwo aan shaqo heysan, taa bedelkeedna ay keentay in lacago loo balan qaado, isla markaana aku biiraan Al-Shabaab.
Kooxihii weerarka Westgate qaaday ayaa ahaa dhalinyaro sida ay sheegeen dadkii ka bad baaday weerarkaas oo ay ku dhinteen in ka badan lixdan ruux.